I-Grocery Manufacturers Association: amaqiniso asemqoka mayelana neqembu elihola phambili lokuhweba ngokudla okungenamsoco
I-Grocery Manufacturers Association - amaqiniso asemqoka
Posted on Mashi 1, 2018 by UGary Ruskin
* I-GMA yiqembu elihola phambili lezokuhweba embonini yokudla okungenamsoco
* I-GMA ifihla uhlu lwamalungu ayo ezinkampani
* I-GMA itholwe inecala lokushushumbisa imali
* Umthetho ophikisayo wokulwa nobugqila bezingane
* Ngaphandle kokuthinta: Amaphesenti angama-93 amaMelika asekela ukufakwa ilebula kwe-GMO, kepha i-GMA iyaphikisana nakho
* Simelana nokulebula okuyisibopho kokudla, sisekela ukulawulwa kokuzithandela
* Izinkulumo ezihlanzekile zokuqeda ukukhuluphala kwengane
* Ukusetshenziswa okusekelwayo kwe-rBST / rBGH obisini, i-hormone yokufakelwa evinjelwe e-EU / Canada
* Uxhaswe umkhankaso wamanga wokulwa ne-ethanol
I-GMA Ifihla Uhlu Lwezinkampani ZamaLungu Wenkampani
IGMA ayisazibhalisi izinkampani ezingamalungu ayo kuwebhusayithi yayo. Nalu uhlu lwakamuva olutholakala esidlangalaleni lwe- [Amalungu e-GMA. Iwebhusayithi ye-GMA nge-archive.org, efakwe kungobo yomlando 12/23/13]
UMongameli we-GMA Wenza imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 2 Million ngonyaka
Kusukela ngoJanuwari 2009, uPamela Bailey usebenze njengoMongameli kanye ne-CEO yeGrocery Manufacturers Association. Kusukela ngo-Ephreli 2014, uBaley wenza amaRandi ayizigidi ezingama-2.06 ngonyaka. [Isiphathimandla sikahulumeni, 4/14] UBailey umemezele ngo-2018 ukuthi uzothatha umhlalaphansi ngemuva kweminyaka eyishumi elawulwa yiGMA. [I-Grocer eqhubekayo, 2 / 12 / 2018]
I-GMA Ithole Inecala Lokukhwabanisa Imali
Ngo-Okthoba 2013, uMmeli Jikelele waseWashington State uBob Ferguson wafaka icala elibhekisa kwi-GMA ngokutholakala kwemali ngokungemthetho. Leli cala lisola ukuthi i-GMA “iqoqe ngokungemthetho futhi yachitha imali engaphezu kwamaRandi ayizigidi eziyisikhombisa ngesikhathi ivikela abanikeli bayo.” [Ukukhishwa kwabezindaba kwe-Attorney General, 10 / 16 / 13]
Ngo-2016, i-GMA yatholwa inecala lokushushumbisa imali yayalelwa ukuthi ikhokhe u- $ 18 million, okukholakala ukuthi iyinhlawulo ephezulu kakhulu yokwephula umkhankaso wezezimali emlandweni wase-United States. [USeattle PI, 11/2/2016]
I-GMA Yembula Abanikeli Ngaphansi Kwengcindezi, Ibonisa Ngaphezu Kwemali Eyisigidi Esigidini ngasinye kusuka kwaPepsi, Nestle, naseCoca-Cola
Ngo-Okthoba 2013, i-GMA yakhipha uhlu lwayo lwabaxhasi ngaphansi kwengcindezi, ikhombisa ukuthi uPepsi, uNestle, noCoca-Cola ngamunye wanikela ngaphezu kwe- $ 1 million.
“IGrocery Manufacturers Association ngoLwesihlanu iveze ukuthi uPepsiCo, Nestle USA kanye neCoca-Cola ngamunye unikele ngeminikelo efihlekile engaphezulu kuka- $ 1 million emkhankasweni wokulwa nomkhankaso waseWashington ozodinga ukufakwa ilebula lokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Usoseshini uvumile ukubeka emphakathini uhlu olude lwabanikeli emkhankasweni wabo wokulwa nokufakwa kophawu ngemuva kokumangalelwa kuleli sonto nguMmeli Jikelele waseWashington uBob Ferguson. ” [The Oregonian, 10 / 18 / 13]
I-GMA Isolwa Ngokufihla Izigidi Zamadola Ngaphezu Kokukholelwa Ekuqaleni
NgoNovemba 2013, uMmeli Jikelele uFerguson uchibiyele isikhalazo sokuqala ukuthi sikhuphuke sisuka ku- $ 7.2 million saya ku- $ 10.6 million isamba okusolwa ukuthi sasifihlwa yiGMA. [Times Seattle, 11 / 20 / 13; Ukukhishwa kwabezindaba kwe-Attorney General, 11/20/13]
I-Counter-Suit Egcwalisiwe Ifuna Ukungavumeli Imithetho Yomkhankaso Wezezimali Edinga Ukudalulwa Kwabaxhasi
NgoJanuwari 2014, i-GMA yaphendula enkantolo yaseWashington Attorney General ngecala elibhekene nokufuna ukwenza imithetho yezimali yomkhankaso wombuso ingasebenzi mayelana nokudalulwa kwabaxhasi.
“Ngemuva kokuzama ukuthonya ngasese imiphumela yevoti ku-Initiative 522, iGrocery Manufacturers Association manje isiphonsela inselelo imithetho yezimali yomkhankaso kahulumeni. NgoJanuwari 3, i-GMA yaphendula enkambisweni yokudalulwa komkhankaso weWashington State Attorney General emelene neGMA ngencwadi ephikisayo. I-GMA iphinde yafaka isikhalazo esihlukile samalungelo omphakathi ngokumelene noMmeli Jikelele waseWashington State uBob Ferguson. I-GMA ithi uFerguson uphoqelela umthetho waseWashington ngokungqubuzana nomthethosisekelo futhi uphonsela inselelo umthethosisekelo wokuthi iGMA ibhalise njengekomiti lezepolitiki ngaphambi kokucela nokwamukela iminikelo yokuphikisana ne-Initiative 522, okuyisinyathelo ebesizodinga ukuthi kubhalwe ukudla kokudla okunofuzo. ” [I-Seattle Post-Intelligencer, 1 / 13 / 14]
Umthetho Wezimangalo we-GMA Ofuna Ukudalulwa Kwabaxhasi kwakungavumelani noMthethosisekelo
Ukuphikiswa kweGMA kubanga ukuthi ukucelwa ukuthi udalule abanikeli bayo akuhambisani nomthethosisekelo.
“Kuleli cala eliphikisayo nelamalungelo omphakathi, i-GMA ithi lokhu okulandelayo akuhambisani nomthethosisekelo njengoba kusetshenzisiwe kuleli cala: Umthetho waseWashington ofuna iGMA ifake ikomidi lezepolitiki ngaphambi kokuqoqa izimali kumalungu ayo ukwenza umsebenzi othile wezepolitiki eWashington; Umthetho waseWashington odinga ukuthi i-GMA idalule izinhlangano ezinikele esikhwameni sayo sezombusazwe esikhethekile nokuthi zinikele ngamalini; nomthetho waseWashington odinga ukuthi i-GMA ivikele imali engu- $ 10 yeminikelo kubavoti abayi-10 abahlukene ababhalisiwe baseWashington njengengxenye yekomidi layo lezepolitiki ngaphambi kokunikela elinye ikomidi lezepolitiki. [Ukukhishwa kwabezindaba kweWashington State Office of the Attorney General, 1/13/14]
Ijaji Linqabe Umzamo Wokuchitha Icala NgoJuni 2014
NgoJuni 2014, iJaji laseThurston County uChristine Schiller wenqaba isiphakamiso esivela kwi-GMA sokuchitha icala elibhekene nokushintshana ngemali.
IJaji laseThurston County ngoLwesihlanu liyichithile imizamo yeGrocery Manufacturers Association yokuchitha icala lapho uMmeli Jikelele wombuso uBob Ferguson esola khona isigungu esizinze eWashington, DC ngokukhwabanisa izigidi zamadola emkhankasweni owedlule. … Ijaji uChristine Schaller usichithile isicelo sososeshini sokuchitha icala. "Isinqumo sanamuhla siyisinyathelo esibalulekile emsebenzini wethu wokubopha iGrocery Manufacturers Association ngecala lokufihla umkhankaso elikhulu kunawo wonke emlandweni waseWashington," kusho uFerguson. [I-Seattle Post-Intelligencer, 6 / 13 / 14]
Icala Lezinqumo Lommeli Jikelele we-Attorney Lizoqhubeka Lizame
Ngemuva kwesinqumo seJaji uSchaller, uMmeli Jikelele uBob Ferguson uthe icala le-GMA lizoqhubeka nokuqulwa kwecala "ngokufanele."
“[IJaji uChristina] Schaller usichithile isicelo sokuthi sichithwe, wanquma ukuthi imithetho yomkhankaso wezezimali yomkhankaso edinga ukuthi kusungulwe ikomidi lezepolitiki nokudalulwa okuhlobene nakho kusetshenziswe ngokomthethosisekelo kuleli cala. Icala manje lizoqhubekela phambili ngokufaneleka kwalo. ” [Ukukhishwa kwabezindaba kweWashington State Office of the Attorney General, 6/13/14]
UMthethosivivinywa Ophikisayo Oveze Ukuqashwa Kwezingane Okufana Nezigqila Emasimini Okhokho
Ngokusho the Okhulumela iSpokane-Review, ngo-2001 i-GMA, kanye nomkhakha woshokoledi, baphoqelela umthetho we-US Congress owawuzodalula imikhuba efana nokugqilazwa kwezingane emasimini kakhokho e-Afrika. [Okhulumela iSpokane-Review, 8 / 1 / 01]
Umthetho ohlongozwayo ubuyimpendulo yophenyo lweKnight Ridder oluthola ukuthi abanye abafana abancane abaneminyaka eyi-11 bayathengiswa noma bakhohliswe ebugqilini bokuvuna ubhontshisi we-cocoa e-Ivory Coast, izwe laseNtshonalanga Afrika elinikezela ngamaphesenti angama-43 kakhokho wase-US. UMnyango Wezwe walinganisela ukuthi zingama-15,000 izingane eziyizigqila ezisebenza emapulazini kakhokho, kakotini nekhofi e-Ivory Coast. [Okhulumela iSpokane-Review, 8 / 1 / 01, Isevisi Yokucwaninga Nge-DRM, 7/13/05]
I-GMA iphelelwe yisikhathi: Amaphesenti angama-93 aseMelika asekela ilebula…
Ngokusho the New York Times ngo-2013, “abaseMelika bakusekela kakhulu ukufaka ilebula kokudla okushintshwe izakhi zofuzo noma okwenziwe, ngokusho kocwaningo olwenziwe yiNew York Times kulo nyaka, ngamaphesenti angama-93 abaphendulile abathi kufanele kudalulwe ukudla okunezithako ezinjalo.” [New York Times, 7 / 27 / 13]
… Kodwa i-GMA iphikisana nemithetho yokuphoqeleka yokuphawula
NgoJuni 2014, i-GMA nezinye izinhlangano ezintathu zomkhakha wezokudla baphonsela inselelo umthetho waseVermont odinga ukuthi amalebula okudla akhombe imikhiqizo enezithako ze-GMO.
“Namuhla, iGrocery Manufacturers Association (GMA), kanye neSnack Food Association, i-International Dairy Foods Association kanye neNational Association of Manufacturers, bafaka isimangalo enkantolo yesifunda eVermont bephikisana nomthetho ophoqelela ukufakwa kophawu lweGMO. I-GMA ikhiphe lesi sitatimende ngokuhlangana nokugcwaliswa okusemthethweni. ” [Ukukhishwa kwabezindaba ze-GMA, 6/13/14]
I-Federal Ban esekelwayo ku-State GMO Labeling Laws
Ngo-Ephreli 2014, i-GMA yakhuthaza ukuvinjelwa kombuso emithethweni yezwe ukuthi kudinge ukuphawulwa okuyimpoqo kwe-GMO.
“Imidondoshiya embonini yezokudla yaseMelika echithe izigidi zabantu ilwa nemizamo yombuso nezwe yokugunyaza amalebuli amasha ezinto ezishintshwe izakhi zofuzo bathatha ikhasi kubaphikisi babo futhi bafuna umthetho wesifundazwe we-GMO. Kodwa iGrocery Manufacturers Association, emele abaholi bokudla neziphuzo abanjengoConAgra, uPepsiCo noKraft, ayihlangani ncamashi nenhlangano elwa ne-GMO. Kunconywa ukuthi kube nomthetho ovumela imboni, umthetho onezinga lokuzithandela - okuyisinyathelo izishoshovu zokudla ezikubona njengokuthathwa kwamandla yimboni eye yazama ukubulala imizamo yokufaka amalebuli e-GMO. ” [I-Politico, 1 / 7 / 14]
Umthethosivivinywa Wowezi-2014 Wethulwe Ukuvimbela Izwe Ekufuneni Amalebula E-GMO
Ngo-Ephreli 2014, kwafakwa umthethosivivinywa eCongress ozovimbela amazwe ukuthi enze imithetho yabo yokufaka ilebula ye-GMO.
“Umthethosivivinywa owethulwe ngoLwesithathu uzobeka uhulumeni wesifundazwe ekuphathweni kokwengamela ukufakwa kwelebheli lokudla ngezithako ezishintshwe izakhi zofuzo, ukuvimbela amazwe ukuthi enze imigomo yawo yokulawula izithako ezinempikiswano. … Kodwa amaqembu abathengi athembisa ukuthi bazolwa nomthetho, abawubona njengomzamo wokubukela phansi imizamo yokudlulisa izinhlelo zokuvota zombuso ezigunyaza ukubhalwa kwemikhiqizo eminingi enezithako ezishintshwe izakhi zofuzo. ” [USA Today, 4 / 9 / 14]
UMongameli we-GMA Ubizwa Ngokuthi Ukunqotshwa Kwesakhiwo 37 “Okubaluleke Kakhulu Kakhulu”
Ngo-2012, uMengameli we-GMA uPam Bailey wathi ukwehlula iProp 37 kwaba yinto ebaluleke kakhulu kwi-GMA ngonyaka ka-2012.
"Enkulumweni yakamuva eya e-American Soybean Association (iningi lasoya elitshalwe e-US liguqulwe ngokwezakhi zofuzo), uMongameli weGrocery Manufacturers Association uPamela Bailey uthe ukwehlula lolu hlelo 'yinto ebaluleke kakhulu kwi-GMA kulo nyaka.'” [Huffington Post, 7 / 30 / 12]
Isekela Ngokuzithandela, Akuphoqelekile, Ukulebula Kokudla
Ngo-2014: I-GMA ne-Food Marketing Institute Yethulwe Umkhankaso Wokulebula Ngokuzithandela wama- $ 50 Million
NgoMashi 2014, i-GMA kanye neFood Marketing Institute baqala umkhankaso wokumaketha ongu- $ 50 million wokuqhakambisa uhlelo lwamaqiniso lokudla okunomsoco lwemboni.
“Imboni yokudla ibonakala ilungele ukuhlanganyela ekuphathweni kuka-Obama ngokwethula umkhankaso wezindaba kuzwelonke wokuqhakambisa amalebula ayo okunomsoco ngaphambili kwamaphakeji okudla. IGrocery Manufacturers Association kanye neFood Marketing Institute, ezimele izinkampani ezinkulu zokudla nabathengisi, bazokhipha umkhankaso wokumaketha ohlangene, basebenzise imali engango- $ 50 million, ngoMsombuluko ukukhuthaza i-'Finance Up Front 'yabo, uhlelo lokuzithandela lomkhakha ngokunikeza imininingwane yokudla okunempilo ngaphambili kwamaphakeji okudla neziphuzo, I-POLITICO ufundile. ” [I-Politico, 3 / 1 / 14]
I-GMA icindezelwe i-Voluntary Federal GMO Labeling Standard
Ngo-2014, i-GMA, kanye nezinye izinhlangano zomkhakha wezokudla, yafuna ukuthi kube nelebuli ejwayelekile yokuzithandela yokuguqula ilebula lomzimba.
I-Double Talk ye-GMA Yokuqeda Ukukhuluphala Kwezingane
I-Grocery Manufacturers Association izishaye isifuba ngokuthi "izibophezele ekwenzeni ingxenye yayo ekusizeni ukunciphisa ukukhuluphala eMelika - ikakhulukazi ukukhuluphala kwengane." [I-GMA Press Release, 12/16/09]
… Kepha Uphikisana Nemikhawulo Ekuthengisweni Kokudla Okungenamsoco, Isoda Ezikoleni
Ngokwencwadi kaMichele Simon Ukulangazelela Inzuzo, "I-GMA irekhodi eliphikisana cishe nayo yonke imali yombuso evimbela ukuthengiswa kokudla okungenamsoco noma isoda ezikoleni." [Ukulangazelela Inzuzo, ikhasi 223]
… Futhi Wasebenzela Ukunqoba Imihlahlandlela Yesikole Yokunakekelwa Kwezikole EseCalifornia, Ithumela Umthethosivivinywa Wokunqotshwa Ngokuqokwa Kokugcina Kwemizuzu
Ngo-2004, imihlahlandlela yokudla okunomsoco ezikoleni zaseCalifornia yehlulekile ngokulandela ukunxenxa ngomzuzu wokugcina kusuka ku-GMA.
“Ngenyanga edlule nje, iCalifornia izamile ukusetha imihlahlandlela yokondleka kokudla okuthengiswa ngaphandle kohlelo lokudla lwenhlangano. Kepha sibonga ukunxenxwa ngomzuzu wokugcina ngabakwaGrocery Manufacturers of America (GMA), lowo mthetho wahluleka ngamavoti amahlanu nje, yize ubesekelwa yizinhlangano ezingama-80 ezingenzi nzuzo. Amaqembu amahlanu kuphela aphikisana nalesi silinganiso - wonke azuza ngokuthengisela izingane ukudla okungenamsoco. ” [UMichele Simon, Isevisi Yezindaba ZasePacific, 9 / 3 / 04]
… Futhi Kwaphikiswa Imihlahlandlela Yesikole Yokondliwa Kwezinye Izifundazwe
Ngokwencwadi Ukulangazelela Inzuzo, I-GMA iphikisana nemihlahlandlela yokudla esikoleni kwezinye izifundazwe, kufaka phakathi iTexas, i-Oregon neKentucky.
“Ukuseshwa kwegama elithi 'izikole' kwi-webhusayithi ye-GMA kuholele ekushayweni okungekho ngaphansi kwezingu-126, iningi lazo okulethwa kuzo ubufakazi noma incwadi efayelwe ephikisana nenqubomgomo yokudla okunempilo ehlobene nesikole. Nazi izibonelo ezimbalwa zezihloko zemibhalo: Incwadi ye-GMA ekuphikisweni kwe-Texas Food and Beverage Imikhawulo, i-GMA Letter ekuphikisweni kwe-Oregon School Restrictions Bills, i-GMA icela i-Veto ye-Kentucky School Restrictions Bill, ne-GMA Letter ekuphikisweni kwe-California School Nutrition Bill . ” [Ukulangazelela Inzuzo, Ikhasi 223]
… Futhi UnamaLobbyists Ezweni Lonke Enhloso Yokuhlulwa Komthetho
Ngaphezu kokunxenxwa kwayo nguhulumeni (okwakuma ku- $ 14 million ngo-2013), i-GMA inamalungu okubamba iqhaza kulo lonke izwe ehlose ukwehlula umthetho ovimbela imboni yezokudla. Ngezansi kunamanye ama-lobbyists wombuso wabo. [Isikhungo Sezombusazwe Esiphendulayo, opensecrets.org, ifinyelelwe ngomhla ka-12/22/14; Imithombo yombuso exhunywe ngezansi]
ULouis Finkel California
UKelsey Johnson Illinois
Ama-lobbyist ayi-7 aneRifkin, Livingston, Levitan & Silver Maryland
UKelsey Johnson Minnesota
AbakwaCapitol Group Inc. I-New York
I-GMA Ifune Ukwenza Kancane Ukuphoqelelwa Kwemithetho Yelebula
NgoDisemba 2011, i-GMA yacela abakwaFood and Drug Administration ukuthi bakhethe ngemithetho yokulebula mayelana namaqiniso ayisisekelo wokudla.
“Ucele ukuthi i-FDA isebenzise amandla ayo okuphoqelela maqondana nezici ezithile zemithethonqubo yokubeka ilebula yokudla ukuze kube lula ukuqaliswa kohlelo lwe-Nutrition Keys, okungukuthi:  Ukusetshenziswa kwezimpawu ezine ze-Nutrition Keys Basic (ama-calories, amafutha agcwele, i-sodium , noshukela ophelele), eyedwa noma ephelezelwa yizithonjana ezingafinyelela kwezimbili ze-Nutrition Keys Optional, ngaphandle kokumenyezelwa kwamafutha we-polyunsaturated nama-monounsaturated kuphaneli lamaNutrition Facts njengoba kudingwa yi-21 CFR 101.9 (c) (2) (iii) kanye (iv) .  Ukusetshenziswa kwezithonjana ezine ze-Nutrition Keys Basic, ezingahambisani nanoma iziphi izithonjana ze-Optional, ngaphandle kwesitatimende sokudalula esidingeka nge-§ 101.13 (h) lapho okuqukethwe kokudla okunomsoco kokudla kudlula amazinga athile wamafutha aphelele, amafutha agcwele, i-cholesterol, noma i-sodium .  Ukusetshenziswa kwezithonjana ezine ze-Nutrition Keys Basic, zodwa noma ezihambisana nezithonjana ze-Nutrition Keys Optional, ngaphandle kokudalulwa kwezinga lamafutha ne-cholesterol eseduze nesithonjana samafutha esigcwele njengoba kudingwa yi-§ 101.62 (c) . ” [Incwadi ye-FDA eya ku-GMA, 12/13/11]
Ukusetshenziswa KweHormone Okuvinjelwe eCanada, i-EU Ukukhuthaza Ukukhiqizwa Kwobisi Ezinkomeni
Ngo-1995, i-GMA yathi i-Food & Drug Administration ithole ukuthi i-hormone yokwenziwa i-rBST “iphephe ngokuphelele.” [Ukukhishwa kwabezindaba kwe-GMA, 4/25/95]
I-rBST / rBGH Kuvinjelwe e-EU, Canada
I-rBST / rBGH ivinjelwe kwimikhiqizo yobisi e-European Union naseCanada.
“I-Recombinant bovine growth hormone (rBGH) iyi-hormone yokwenziwa (eyenziwe ngabantu) emakethwa kubalimi bezobisi ukuze kwandiswe ukukhiqizwa kobisi ezinkomeni. Isetshenziswe e-United States selokhu yamukelwa yi-Food and Drug Administration (FDA) ngo-1993, kodwa ukusetshenziswa kwayo akuvunyelwe e-European Union, eCanada nakwamanye amazwe. ” [Iwebhusayithi yeAmerican Cancer Society, umdlavuza.org]
Ummangali ku-Vermont Icala Lokumangalelwa Ngokubhalwa Kwe-rBST / rBGH
Ngokuya ngeThisLaw.com, uGMA wayengummangali osebenzisana ne-IDFA vs. Amnestoy, icala eliphathelene nokufakwa kophawu kwemikhiqizo yobisi ekhiqizwa ezinkomeni eziphathwe nge-rBST / rBGH. [TholaLaw.com, kufinyelelwe ku-12/17/14; INkantolo Yokudlulisa Amacala yase-United States, i-International Dairy Foods Ass'n v. Amestoy, Icala No. 876, Idokodo 95-7819, linqume umhla ka 8/8/96]
“'Umthetho ophoqayo wokufaka amalebuli eVermont undizela ekuzimiseleni kwe-FDA ukuthi i-rBST iphephe ngokuphelele nokuthi ukufakwa kwamalebula okuphoqelekile akufanele kudingeke,' kusho uJohn Cady, umongameli weNFPA. 'Umthetho kungenzeka udlulisele kubathengi umbono ongamanga futhi odukisayo maqondana nokuphepha nobumsulwa bobisi oluvela ezinkomeni ezenezelwe yi-rBST.' ”[Umbiko wezindaba we-GMA, 4/25/95]
Ubisi Lwelebula Oluphikisiwe Lukhiqizwa ngeHormone Growth
Ngokusho the St Louis Post-Dispatch, ngo-1993-94, i-GMA yaphikisana namalebula emikhiqizweni yobisi etholakala ezinkomeni ezijovwe ngeMonsanto eyimpikiswano yeBovine Growth Hormone (rBGH). [St Louis Post-Dispatch, 3/3/94]
I-GMA Iphikise Umthetho Welebula wase-Ohio owawushayeke phansi
Ngokuvumelana ne I-FoodNavigator-USA, I-GMA namanye amaqembu embonini yokudla aphikisana nomthetho wokulebula wase-Ohio owashaywa phansi yinkantolo yokudlulisa amacala. [I-FoodNavigator-USA, 4 / 25 / 08]
Umthetho wombuso wase-Ohio okukhulunywa ngawo uvimbele izitatimende ezinjenge- "rbGH Free," "rbST Free" kanye "ne-hormone yokufakelwa mahhala," okuhloswe ngayo ukunikeza abathengi ulwazi oludingekayo ukwenza izinqumo ezinolwazi. Isikhungo Sokuphepha Kokudla, 9 / 30 / 10
Umkhankaso Wokulwa ne-Ethanol Wenkohliso Oxhasiwe
NgoMeyi 2008, uSenenja Chuck Grassley waveza ukuthi umkhankaso wokulwa ne-ethanol okwakuthiwa "ungaphansi," empeleni wawusekelwa yinkampani ye-PR eyayiqashwe yi-GMA.
"Ngokwamaphepha amabili abhalwe kwi-website yenhlangano ka-Sen. Charles Grassley, i-R-IA, i-blitz 'anti-ethanol media blitz' ethinte amanani entengo okudla namuhla kuma-biofuel asekelwa ngabalimi iyimbumbulu njenge-astro-turf. Ngempela, uGrassley wachazela ozakwabo baseSenate ngesikhathi evuma umthethosivivinywa omusha wepulazi, 'Kuvela ukuthi imali engama- $ 15, eyizinyanga eziyisithupha yokugcina inkampani yaseBeltway yezobudlelwano nomphakathi yiyo ebambe iqhaza emkhankasweni wokugcona, oqashwe yiGrocery Manufacturers Association.' ” Izindaba ze-Aberdeen, 5 / 30 / 08
I-GMA Ifune Ukuthatha Inzuzo Yezintengo Zokudla Ezikhuphukayo
Ngokwesicelo sayo seziphakamiso, i-GMA ithe ikholelwa ukuthi ukunyuka kwamanani okudla kunikeze inhlangano ithuba lokushaya i-ethanol.
“I-GMA ibihola umkhankaso 'wobudlova' wobudlelwano bomphakathi ezinyangeni ezimbili ezedlule emzamweni wokubuyisela emuva igunya le-ethanol elaphasiswa kumthethosivivinywa wamandla nyakenye. Lo soseshini uqashe iGlover Park Group ukuthi iqhube umkhankaso wezinyanga eziyisithupha, ngokwesicelo seGMA sokuphakanyiswa kanye nempendulo yeGlover Park. 'I-GMA isiphethe ngokuthi ukukhuphuka kwentengo yokudla… kwakha iwindi lokushintsha imibono ngezinzuzo zama-bio-fuels kanye negunya,' kufundeka i-RFP enamakhasi amathathu, ikhophi yayo eyatholwa yiRoll Call. ” [I-Roll Call, 5 / 14 / 08]
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, izibulala-zinambuzane, Abathandekayo I-American Soybean Association, AbakwaCapitol Group Inc., Coca-Cola, I-ConAgra, Isikhungo Sokumaketha Kokudla, IGlover Park Group, Ukulebula kwe-GMO, Inhlangano Yabenzi Begilosa, I-International Dairy Foods Association, UJohn Cady, Indawo yokwamukela ukudla engenamsoco, UKelsey Johnson, Kraft, ULouis Finkel, imali yokwehliswa kwemali, Monsanto, Inhlangano Kazwelonke Yabakhiqizi, I-Nestle, I-NFPA, Pamela Bailey, Pepsi, I-PepsiCo, URifkin Livingston Levitan neSiliva, I-Snack Food Association